अर्थमन्त्रीलाई हटाउन ब्यवसायीहरुको दवाव, के गर्लान प्रधानमन्त्री ओली ? — Motivatenews.Com
काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हटाउन ब्यवसायीहरुले चलखेल सुरु गरेका छन् । उनको ठाउँमा चितवनबाट निर्वाचित सुरेन्द्र पाण्डेलाई ल्याउन शक्ति केन्द्र धाउन थालेको खवर सार्वजनिक भएको छ ।
कसिलो आर्थिक नीति, कडिकडाउ आर्थिक व्यवहार र सेयर बजारको छलाङ खुम्चिएको भन्दै व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री खतिवडाबाट रुष्ट छन्। यतिसम्म कि कतिपय व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रीबारे गुनासो लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अर्का अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारसम्म पुगेर अर्थ मन्त्रीका बारेमा सोच्न अग्रह गरिरहेका छन । तर, अर्थमन्त्रीबारे ओली र दाहालबीच फरक–फरक मत रहेको एक नेताको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री खतिवडासँग खुसी नै हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले मोटिभेट संग भने, ‘व्यापारीहरुका चाहना के हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ। उनीहरुको स्वार्थभन्दा देशलाई दिर्घकालीन असर गर्ने आर्थिक नीति महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा ओलीले बुझ्नु भएको छ।’
तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने अर्थमन्त्रीबारे अलग धारणा राख्छन्। दाहालको चाहनाबारे उनी निकट एक नेताले केहीदिन अघि भनेका थिए, ‘अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा चितवनबाट जनमत प्राप्त सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीको कुर्चीमा राख्न सकियोस्।’
यतीमात्र हैन मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो पटक छलफल भएको समाचार सतहमा आएपछि एकजना कहलिएका व्यापारीले प्रधानमन्त्री ओलीका एक सल्लाहकारलाई फोनै गरेर सोधे, ‘अरु कुरा चाहिएन, अर्थमन्त्री चेन्ज हुन्छन् कि हुन्नन् सर ?’
सल्लाहकारले जवाफ दिए, ‘अर्थमन्त्री त यसै भन्न सकिन्न। दुई पार्टी अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ। मलाई थाहा भएको यत्ति हो।’ निजी क्षेत्रका व्यापारिक केही समूहहरु अर्थमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन्।